चुरोट पिउनेलाईमात्र होइन साथमा संगै बस्नेलाई पनि गम्भीर असर गर्छ डा. दीर्घ सिंह बम - Pabil News
चुरोट पिउनेलाईमात्र होइन साथमा संगै बस्नेलाई पनि गम्भीर असर गर्छ डा. दीर्घ सिंह बम
अशोज १२ गते, २०७८ - १२:३७
हामीलाई धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ र यसले मान्छेको फोक्सोेमा असर गर्छ भन्ने धेरैले सिकाउने गर्छन् । तर चुरोट खानेको छउछाउ समेत पर्नुहुँदैन भनेर कसैले पनि सिकाउँदैन । सार्वजनिक स्थानमा चुरोट तान्न कानुनी रुपमा प्रतिबन्ध छ, तर यो नियम पनि पूर्ण रुपमा पालना हुँदैन । कोही मान्छे आफू चुरोट खाँदैन तर चुरोट खानेबेलामा अरुसँगै हुन्छ भने ऊ आफैँमा जोखिममा हुने गरेको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
चुरोट खाने मान्छेमा चुरोटमा हुने निकोटिनले सिधै फोक्सोमा असर गर्छ । तर चुरोट नखाने भए पनि चुरोट खानेसँगै बस्ने मान्छेहरुमा यसले बिस्तारै उस्तै खाले असरहरु गर्दै जाने गरेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ ।
दक्षिणी न्युजिल्याण्डको डिपार्टमेन्ट अफ पब्लिक हेल्थ, वेलिङटन स्कुल अफ मेडिसिनले सन् २००१ मा गरेको अध्ययनले प्रतिवर्ष ३४७ जनाको मृत्यु चुरोट नखाने तर चुरोट खानेसँग नजिक बसेका कारणले भएको पाइएको छ । रिपोर्टमा यो पनि लेखिएको छ कि यदि उनीहरुमध्ये ३२५ जनाको मृत्यु चुरोटको छेउमा मात्रै नबसेको भए पनि रोकिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, २०१४ मा अमेरिकामा भएको एक अध्ययनअनुसार घर तथा कार्यालयमा अर्काले खाएको चुरोटका कारण २५–३० प्रतिशतमा मुटुको रोग हुने सम्भावना देखाएको थियो ।
त्यसको ठीक ३ वर्षपछि सन् २०१७ सालमा अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एण्ड ह्युमन सर्भिसले गरेको अध्ययन अनुसार प्यासिभ स्मोकिङको कारणले वार्षिक ८००० भन्दा धेरैको ज्यान जाने गरेको देखाएको छ । त्यस्तै, सोही अध्ययनले वार्षिक ७३०० जनामा भने फोक्सोको क्यान्सरका कारण मृत्यु भएको देखाएको छ, मृत्युहरु जुन चुरोट नपिउनेहरु थिए ।
२०५२ सालदेखि २०६१ सालसम्म राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको निर्देशक बनिसकेका डा। दीर्घसिंह बम प्यासिभ स्मोकिङले पनि मान्छेमा गम्भीर समस्या निम्त्याउने बताउँछन् । अर्को व्यक्तिले तानेको चुरोटले दोस्रो व्यक्तिलाई असर गर्छ भने त्यसलाई प्यासिभ स्मोकिङ भनिन्छ ।
कुनै पनि मान्छेले चुरोट तान्दा उसलाई जति असर हुन्छ, त्यसको ५० प्रतिशत असर एउटै कोठामा बसेका अरुलाई पर्ने बम बताउँछन् । जस्तो समस्या चुरोट पिउनेमा हुन्छ, त्यस्तै समस्या चुरोट तान्ने व्यक्तिको नजिक बस्नेलाई पनि हुन्छ, कुरा यत्ति हो कि चुरोट पिउनेलाई सिधा असर पर्छ, सँगै बस्नेलाई बिस्तारै यसको असर देखिन्छ ।
बम भन्छन् ‘म चुरोट खाँदिन भनेर मात्रै पनि हुँदैन, चुरोट खानेको साथमा बस्नेलाई पनि उत्तिकै असर पर्छ । त्यसैले म चुरोट खान्न भन्ने मात्रै होइन कि मेरो छेउमा चुरोट खान दिन्न समेत भन्न सक्नुपर्छ ।’
पहिलोपल्ट १२ वर्ष माथिकालाई लगाउन मिल्ने एक लाख फाइजर खोप आइपुग्यो
पूर्व पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई वीरअस्पताल भर्ना
दसैपछि १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिने
निपाह भाइरस : संक्रमणबाट कसरी जोगिने,
बेनिघाटमा आँखा केन्द्र स्थापना
धादिङ अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट थपियो, अब दैनिक ७२ सिलिण्डर उत्पादन
धादिङमा ४५ वर्ष माथीका २० हजारलाई कोरोना खोप लगाइदै